'दशैंमा रक्सी र सितन' रमाईलो हैन स्वास्थलाई खतरा !! | Hamro Patro
स्मरण रहोस्, जीवनकालमा केवल एउटा शरीर छ र आफ्नो स्वास्थको सुरक्षा हाम्रो दायित्व हो । दशैं लाई अस्वस्थ रमाइलो संग जोडेर आफ्नो स्वास्थ संग संझौता नगरौं, हुन्न र ?
अहिले दशैंको यो माहौलमा घरघरमा अनि चोक चोकमा नेपाली शहर र गाँउहरु रमाईलो को सिलसिलेवार परिवृतीमा रक्सी अनि मासुको बडो अदभूत संगममा रहेको संभावना के हामी नकार्न सक्छौं ? बढि चिल्लो कुरा अनि मासुको अत्थाधिक सेवनले स्वास्थमा हानी पूर्याएर दशैंको चिरञ्जीवी बन्नु भन्ने आशिष नै उल्टो त पर्न जाने हैन ?
लु आउनुहोस्, केही अावश्यक जानकारीतर्फ लागाैंः
पक्कु राख्ने, पोल्ने अनि चपचिल्लै तेलमा डुबेको मासु खाने लगभग दशैंको हस्ताक्षर जस्तो भइसकेको छ । अनि यही सितनसंग तानिने रक्सीका ग्लासहरु वास्तवमै हानीकारक छन् । सकेसम्म रक्सी नखाएकै राम्रो तर अझ मासु र रक्सी स्वास्थका दृष्टिले झन हानीकारक छ । एक त रक्सी आँफैंमा अत्याधिक क्यालोरी हुने र मासुसंग सेवन गर्दा झनै खराब हुने गर्दछ । धेरैलार्इ एउटा भ्रम छ, 'रक्सि जस्तो कुरो खाएपछि डाइटका रूपमा माछा, मासु चाहिने ।' तर यो सोंचार्इ ठिक उल्टो हो, गलत हो ।
यता हाम्रो तिर भनें मासुका विभिन्न परिकारलार्इ सितनको रूपमा रक्सी खाने चलनले गर्दा ज्यानमा इन्डोटक्सीनको श्रृजना गर्दछ । यसले गर्दा सबैभन्दा असर हाम्रो कलेजोलाई गर्दछ । त्यसै कारणले गर्दा पनि नेपालीहरुमा सामान्यतया फ्याटी लिभरको समस्या धेरै देखिन थालेको हो । अत्याधिक सितन र रक्सीको संयूक्त सेवन अनि शारीरीक क्रियाकलापको कमीले गर्दा यो समस्या झनै बिकराल छ । मासुमा अत्याधिक आइरन हुने हुँदा रक्सी र मासुको यो खुराकमा आइरनको अत्याधिक मात्राले कलेजोलाई झनै असर गर्दछ, यो वास्तवमा स्वास्थका हिसाबले एउटा बेमेलको साैखिया भोजन हो ।
ब्रान्डी, ह्वीस्की, रातो वाइनहरु धेरै सेवन नगरौं, प्रशस्त पानी सेवन गर्न नभुलौं । बियर लगायतका सफ्ट ड्रिन्कहरुले कम असर गर्छ भन्नु गलत हो, बियरमा पनि प्रशस्त क्यालोरी हुन्छ । मासु र बियरको केमिस्ट्री ज्यादै नराम्रो हो । हरेक पेग रक्सीसंगै पानी सेवन गरौं, मदिरा सेवन गर्नुहुन्छ भनें पानी धेरै सेवन गर्नुहोला । खाली पेटमा भनें रक्सी सेवन नगरौं, केही सुपाच्य खाना खाएर पेट केही मात्रामा भरेर मात्र रक्सी सेवन गर्दा कम हानी हुन्छ ।
यसपालाको दशैं चाँडै छ, गर्मीको असर घटेको छैन् तसर्थ सावधानी जरुरी छ । चिसा पेय पदार्थहरु बोतलमा किनेर खानुभन्दा कागती पानी या घरमै बनाएको सर्वतको सेवन गर्ने बानी बनाऔं ।
स्मरण रहोस्, जीवनकालमा केवल एउटा शरीर छ र आफ्नो स्वास्थ जीवनसंग जोडिएको बिषय भएको हुँदा यसको सुरक्षाको हाम्रो दायित्व पनि हाम्रै हो । दशैंलाई अस्वस्थ रमाइलोसंग जोडेर आफ्नो स्वास्थसंग संझौता नगरौं, यति गर्न सकिन्न र ?
मासु नै खान परेमा पनि सकेसम्म सेतो मासु जस्तै कुखुरा या अन्य पक्षीका मासु अनि माछा सेवन धेरै गरौं अनि पकाउँदा सकेसम्म थोरै तेल र मसला हालेर पकाउने गरौं ।
मासु मनपर्छ त्यो ठिक छ तर मासु स्वस्थ तरिकाले खाएमा रोग अनि स्वस्थ समस्याबाब जोगीन सकिन्छ, बिचार गरौं है !